မသန်စွမ်း – Nyang Media
အင်တာဗျူးဩဂုတ် 24, 2018
NZPK / iSchool-Myanmar ၏ သုတေသနပညာရှင် မ နော်ဇာဖြူခန့် အဖိုးအရင်းက မုဒိမ်းကျင့်ထားတဲ့ အမှုပေါ့နော်။ ကျွန်မတို့က ဒီဘက်မှာ တိုင်ပေးနေပြီ။ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် ကလည်း သွားကြည့်နေပြီ။ နောက်ဆုံး ကျတော့ လူမှုဝန်ထမ်း...
အင်တာဗျူးဩဂုတ် 22, 2018
YYH / iSchool-Myanmar ၏ စီမံကိန်းမန်နေဂျာ ကိုရဲဝင်း အမျိုးသားကော်မတီက ကော်မတီ ဖွဲ့လိုက်ရုံနဲ့၊ အယောင်ပြရုံနဲ့ မရဘူး။ တကယ်အလုပ်လုပ်ရမယ့် ကိစ္စတွေ ပါနေတယ်။ လွှတ်တော်ကလည်း မသန်စွမ်း ရန်ပုံငွေကို ပြဌာန်းပေးရမယ်။ လူမှုဝန်ထမ်း အတွက်...
လူတဖက်သားကို စော်ကားရာရောက်တယ်။ အဲဒါမျိုးတွေ ဆင်ခြင်သင့်တယ်
အင်တာဗျူးအောက်တိုဘာ 23, 2017
ငြမ်း / ပညာရေးကော်မတီအတွင်းရေးမှူး ကိုရဲဝင်း အနှိမ်ခံအုပ်စုတွေ၊အားနည်းတဲ့အုပ်စုတွေ၊ ကလေးတွေ၊ အားနည်းတဲ့သူတွေ၊ တချို့ရောဂါသည်တွေအတွက် ဒီလိုမျိုးဥပဒေတွေ ထွက်လာတာဟာ သူတို့ဟာ ဖိနှိပ်ခံနေရတယ်၊ သူတို့ စော်ကားခံနေရတယ်၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းက တချို့လူတွေကနေ ... မသန်စွမ်းသူများအပေါ် ထိခိုက်စော်ကားမှုများရှိနေကြောင်း ဝေဖန်မှုများရှိနေတဲ့...
Copyright © 2017. All rights reserved by Nyang Media.